Doppler waa la cusbooneysiiyay loomana baahna in la isticmaalo iTunes | Wararka IPhone
Runta ayaa ah in la xakameyn karo muusikadaada ku kaydsan iPhone-ka iyada oo aan loo marin iTunes-ka waa guul. Horaan uga hadalnay Doppler dhowr bilood ka hor iyo, in kasta oo ay weli jiraan astaamo in lagu daro, horumariyaha Edward Wellbrook wuxuu xaqiijiyay in qaababka mustaqbalka ay jiri doonaan waxyaabo lala yaabo. Kuwaasna horeyba ayaa yimid qaabkii ugu dambeeyay ee Doppler 1.1.
Maxaan ka filan karnaa noocaan cusub? Hagaag, tusaale ahaan: wax ka bedel liiska ciyaaraha ee arjiga; awood u yeelan karaan inay faylasha u soo dhoofsadaan iPhone-keena oo leh MP3, FLAC, WAV, iwm. Iyo awood ka soo rar faylasha arjiga "Faylasha" adigoon marin iTunes.
Kaliya ma awoodi doontid inaad ka dhoofsato feylasha maamulaheena faylka ee la muuqday iOS 11, laakiin sidoo kale waad sii wadi kartaa adeegsiga iTunes ama AirDrop. Waa badan tahay, waxaan kuu sheegi karnaa inaad faylasha u gudbin karto Doppler oo ah a Pendrive.
Waxaan u adeegsanay kiiskan a Pendrive laga bilaabo Transcend, oo ku habboon maaraynta sawirradeenna iyo fiidiyowyadeenna si dhakhso leh. Sidee? Hagaag, xulashada feylasha inaga xiiseynaya gudaha xusuusta USB-ga iyo koobiyeynta. Liistada sidoo kale soo muuqan doonta ikhtiyaarka nuqulka ayaa soo muuqan doona. Waxaan u wareejin doonnaa dhammaan waxyaabaha ku jira galka Doppler. Xaaladdan oo kale waa inaynu maanka ku haynaa in si loo maareeyo xusuusta Transcend waxaan u baahan nahay inaan soo dejino a app milkiilaha kaas oo noo fududeyn doona shaqadeena. In kasta oo aan ka hadli doonno xusuusta USB-ga maqaal kale maadaama ay ahayd beddel qurux badan oo laga wareejiyo faylasha culus hal meel oo loo wareejiyo meel kale.
Hadda, xalka ugu macquulsan, laga yaabee, in la isticmaalo AirDrop. Ka soo qaad Mac-kaaga, iyada oo loo marayo «Finder», ku calaamadee dhammaan raadadka aad rabto inaad soo dejiso. Marka aad liistada diyaar ahaato, riix batoonka "Share" - sawirrada ku lifaaqan waxaad ka arki kartaa meesha ay ku taal, dooro ikhtiyaarka AirDrop oo u dir dhammaan waxyaabaha ku jira iPhone-kaaga Aqbal faylasha adoo adeegsanaya taleefanka gacanta isla markaana dooro inaad ku furto dhammaan faylasha Doppler. Taasi waa sida fudud wax walba waa. Si kale haddii loo dhigo, hab lagu maamulo maktabadaada muusikada oo leh xorriyad yar.
Markaad isticmaasho 'Doppler' iPhone-kaaga, dabcan –iyo baaxadda maktabaddaadu halkan ayey soo geli doontaa –, waxaad ka raadin kartaa farshaxanno, albumyo ama wadiiqooyin cayiman si aad si dhaqso leh u gaarto dookhaaga. Waxa kale oo xiiso leh in la ogaado taas la jaan qaada isticmaalka AirPods, HomePod ama aalad kasta oo maqal ah oo Bluetooth ah. Hadda, waa inaad sidoo kale ogaataa in Doppler uusan ahayn barnaamij bilaash ah. Qiimaheedu waa 4,99 euros.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Doppler waa la cusbooneysiiyay mana loo baahna in la isticmaalo iTunes
"Horumar sameeye Edward Wellbrook wuxuu ku andacooday in noocyada mustaqbalka ay jiri doonaan waxyaabo lala yaabo" ... "Waxaa jiri lahaa wax lala yaabo"
Heerka qoraalka halkan wuxuu indhaha ka dhigayaa dhiig. Xeerarka naxwaha dugsiga barbaarinta carruurta